Fabian Delph oo u mahad celiyay macalinka xulka qaranka England Gareth Southgate, kadib markii uu arintan u sameeyay – Gool FM
Fabian Delph oo u mahad celiyay macalinka xulka qaranka England Gareth Southgate, kadib markii uu arintan u sameeyay
Dajiye July 7, 2018
(Russia) 07 Luulyo 2018. Laacibka xulka qaranka England Fabian Delph ayaa u mahad celiyay Gareth Southgate kadib markii uu u ogolaaday inuu u safro dalka England, sabab la xiriira dhalashada sanad guurada saddexaad ee wiilkiisa yar, kahor inta aan la gaarin kulanka Sweden.
Xulka qaranka England ayaa guul kaga gaaran 2-0 dhigooda Sweden kulankii ay ku wada ciyaareen wareega 8-da ee koobka aduunka 2018, waxayna u gudbeen wareega 4-ka markii ugu horeesay tan iyo sanadii 1990-kii.
Fabian Delph ayaa kadib marka uu kulanka soo idlaaday kala hadlay arintan saxaafada.
“Way adag tahay in erayo lagu cabiro, wuxuu ahaa isbuuc aad u wanaagsan, mahadsanid Gareth Southgate, sababtoo ah wuxuu ii ogolaaday inaan dib ugu laabto gurigeyga”.
“Wuxuu ii ogolaaday inaan ka qeyb galo dhalashada wiilkeyga, waxay ahayd xaalad aad iigu adag”.
“Waxay aheyd xaalad waali ah inaan dib ugu laabto England, waxaana isku dayay inaan u sharaxo dadka qaar, laakiin xaalad adag ayay aheyd”.
“Waan ku faraxsanahay inaan dib ugu laabto dalkeyga, si aan kaga qeyb qaato arintan”.
Mid ka mid ah xidigaha ugu muhiimsan kooxda Real Madrid oo qeyb kasoo noqday qorshaha Napoli ee suuqa xagaaga
Naby Keita iyo Fabinho oo u ciyaaray Liverpool kulankii ugu horeeyay +SAWIRRO